केहि पनि आफ्नै हातले बनाएको चीज जस्तै घरलाई आनन्दित तुल्याउँदैन। र यो सही छ, घरको लागि विभिन्न घरको उत्पादनहरू न केवल जीवनलाई उज्ज्वल रङहरू भरेर भरिएको छ, तर आन्तरिक एक विशिष्टता र एक निश्चित उत्तेजना पनि दिन्छ। र यस कुराको बारेमा बिर्सनु असम्भव छ (यो एक सानो ट्रिंकसेट)। र यो महत्वपूर्ण छैन कि यो घर, पेपर वा प्लास्टिकको लागि घरको बनाइएको काठको हो। विभिन्न चीजहरू गर्ने विकल्पहरू र तरिका लाखौं छन्, र आज हामी धेरै मा विचार गर्नेछौं। त्यसकारण, तपाईं कसरी घरको लागि रोचक घर बनाउनुहुन्छ?
टिन डिब्बाको शेल्फ
यो लाग्थ्यो, यस्तो चिन्ता - कफीको जार। तथापि, यहां सम्म कि तपाईं घर को चीजहरु को भंडारण को लागी एक सुंदर, सुविधाजनक र उपयोगी शेल्फ बना सकते हो। प्रायः यस्ता कन्टेनरहरूमा विभिन्न स्मारकहरू र स्मरणी फोटोहरू भण्डारण गर्छन्। यस घरको सानो छोरोबाट व्यावहारिक लाभहरू, तर यी जारहरूले धेरै अनुभूति देख्छन्।
यस शिल्प बनाउने आदेशको बारेमा विवरण
1. पहिले जारहरूमा एक ड्रिल वा विशेष चाकू-रस्सी पन्च छेदहरू (ऊपरी र निचोड-3 को लागि, र सबै बाँकीका पर्खालहरूमा -2अंकहरू)।
त्यसपछि त्यसपछि जारहरू सँगसँगै छिटो हुन्छन्। को रूपमा फास्टनर, नट्स र सानो आयामहरु को शिकंजा प्रयोग गरिन्छ। वैसे, वांछित (सुन्दर) परिणाम प्राप्त गर्न, तपाईंलाई कम्तिमा 5-6 जस्तै जार हुन आवश्यक छ।
3. पछि, शिकंजाहरूको लागि एउटा प्वाइन्ट ट्यांकमा मुक्का छ। संरचनाको शीर्षमा स्थित जारको तलमा, 1-2 वटा पखेटालाई पर्खालमा मिलाउन मिलाईएको छ। घर का बना पेंच पेंच शिकारी या शरद ऋतु समाप्त भयो। यसका लागि प्रारम्भिक, डुवेलहरू पर्खालमा घुमाईन्छ।
सबै कुरा, घरको लागि अब घर बनाइयो व्यापारमा प्रवेश गरियो। निश्चित हुनुहोस् - यस्ता जारहरूमा विभिन्न साना चीज गुमाउनु हुँदैन। यसरी, तपाईं दुई पक्षीहरूलाई एक पत्थरको साथमा मारेर आन्तरिक सजावट र घरको विकारबाट हटाउनुहुन्छ।
घरको सजावट घर सजावट - कसरी सीडी / डीभिडीमा घडी बनाउने?
CD-ROM मा घडी पनि सजावटको आन्तरिक को एक धेरै रोचक र मूल प्रकार हो। जाहिर छ, यो यन्त्रको डिजाइन धेरै मूल हो, र त्यसैले यो कुनै पनि इंटीरियरको पृष्ठभूमिमा संगठनात्मक रूपमा देख्न सकिन्छ (सायद यो हाइलाइट हो)। यस्तो "स्मार्ट" गृहनिर्धारित उत्पादहरू केहि मिनेटमा घरको लागि बनाइन्छ। सबै चरणहरूको बारेमा थप विवरण हामी तपाइँलाई केवल तल तल बताउनेछौं। त्यसोभए तपाई कसरी एक घर बनाएर हेर्नु हुन्छ? सुरू गर्न, तपाईलाई सान्दर्भिक सामग्री तयार गर्न आवश्यक छ - एक सीडी / डीभिडी सीडी (तपाइँ आफ्नो सामने आवरणको लागि डिजाइन चयन गर्न सक्नुहुन्छ) र यसको लागि आवरण (पर्खालहरू बीचको दूरी कम्तिमा 0.05 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ)। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि अन्तिम विवरणमा कुनै पनि चिप्स वा खरोंच छैन। कामलाई सहज बनाउन, तपाईं एक तयार बनाइएको घडी देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि मात्र मानक डायल प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ।
घडीको तन्त्रणा एक स्विच हुनुपर्छ, अन्यथा यसले काम गर्दैन। साथै यो आंकडा गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ तिनीहरूका बाह्रजनाहरू मात्र हुनुपर्छ। यो गत्ता, कागज वा प्लास्टिक सर्कल हुन सक्छ। तिनीहरूको मोटाई दुई मिलिमिटर भन्दा बढी हुनुपर्दछ। सजावटको रूपमा तपाईले स्फटिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईं को बारे मा 30-40 सेन्टिमिटर तार को तार, छाला को एक टुकडा या कपडे र superglue "पल" जस्तै तैयार गर्न को लागि। यो सम्पूर्ण डिजाइनको मुख्य चीज एक सीडी-रोम हुनेछ। हामी यसलाई पहिल्यै पुनःप्राप्त गर्नेछौं।
पहिला, तपाईंले डिस्क विभाजन गर्न बारम्बार बराबर भागहरूमा विभाजन गर्न र अंकहरूलाई चिन्हित बिन्दुहरूमा पेस्ट गर्न आवश्यक छ। यस अवस्थामा, क्षेत्रहरू उपकरणको बाहिरी व्यास भन्दा बाहिर जान हुँदैन। घरको बनाइएका उत्पादनहरू कसरी बनाइयो? सेकेन्ड पछि हामी घडीमा जान्छौं - तीरलाई गोली हानेर र हाम्रो डिस्कको बीचमा ठीक ठाउँमा राख्नुहोस्। वैसे, तिनीहरूलाई संलग्न गर्नु अघि, तपाईं डिस्कमा केही रोचक फोटो पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन घडीको डिजाइन अझ बढि मूल बनाउनेछ। तीरको आकार बढाउन, पतली धातु स्ट्रिप्स प्रयोग गर्नुहोस्। इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न, यो गोंद लागू गर्न पर्याप्त छ र सही तरिकाले गाइड तत्वहरू को सम्पूर्ण सतहमा सही स्थितिको स्थिति राख्दछ। तीरहरूको एउटै मेनेजमेसन डिस्कको पछाडि जोडिएको छ।
अर्को के गर्नु हुन्छ?
त्यसैले, घडी आधार लगभग तयार छ। अर्को चरणमा उपकरणमा छेदहरू तीर तन्त्रणाको समतलको साथ बनाइनेछ। यो डिस्कको क्षेत्रमा यो डिस्क स्थापना गरिएको छ। तन्त्रमञ्चमा आफैं खोलिएको छ र बलियो रूपमा बन्द गरिएको छ। अब, तारको सहयोगको साथ, जोर राखिएको छ, जुन पछाडि आवरणमा चिपकिएको छ। यसलाई अझ बढी टिकाऊ बनाउन, माथिको कपडा वा छालाको टुक्रा गोंग। यसले फोकस न केवल बलियो बनाउँछ, तर सुन्दर पनि, तारको अतिरिक्त भाग अब घडीको रूपमा घटेको छैन किनभने। सबै कुरा, कम्पैक्ट डिस्क बाट स्व-निर्मित घडी सफलतापूर्वक बनाइयो। यो केवल AA ब्याट्री घुसाउन र समय सेट गर्न बनी रहन्छ। वैसे, तपाईं ब्याट्री पनि आफ्नो हातमा राख्न सक्नुहुनेछ।
कसरी नींबूबाट ऊर्जाको स्रोत बनाउन सकिन्छ?
हामी जान्दछौं, यस फलले धेरै एसिडहरू क्रमशः, सही कार्यहरूको साथमा, नींबू एक वास्तविक मिनी ब्याट्रीमा परिणत गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, यस्तो "ब्याट्री" बाट चार्ज घरेलू उपकरणको कामको लागि पर्याप्त छैन, तर डेस्कटप घडीको कार्यवाही वा मोबाइल फोन चार्ज गर्न यो हालको लागि पर्याप्त छ।
घरको लागि घर बनाउन - निरन्तर ऊर्जाको स्रोतमा लेमन कन्वर्ट गर्न उपकरण तयार गर्दै
कामकालमा तपाईंलाई चाकू, एक सोल्डरिंग फलाम, एक ड्रिल, लोहेको पिन, र अलगावमा तांबेको तारका धेरै टुक्राहरू पनि आवश्यक छ। अन्य चीजहरू बीच, यो एक गिलास वा एक गिलास, एक जोडाको काठको टुक्रा र एउटै संख्यामा क्लोरिकल बटनको लागि ध्यान दिनुपर्छ। अनि निस्सन्देह, ऊर्जाको मुख्य स्रोतमा हामीले नींबू पाउनेछौ। तपाईं पनि लागू गर्न सक्नुहुन्छ र नारंगी, तर यसमा एसिड धेरै सानो छ, त्यसैले यसको शुल्क कम से कम हुनेछ।
पहिला तपाईंले नींबूलाई माथमा काट्नु पर्छ। यो अडिसन दिनको लागि आवश्यक छ जुन वर्तमान स्रोतको लागि आवश्यक छ । लेमन एक गिलासमा तय गरिएको छ ताकि यो तालिकामा रोल गर्दैन। यसबाहेक, तांबा र फलाम पिनहरू यसको लुगामा परिधिमा 0.5-1 सेमिटरसम्म फैलिएको छ। "माइनस" हामी फलाम हुनेछौ, र "प्लस" तांबे हो।
टाँस्ने फलामको सहायताले सबै पिठहरू संलग्नको टुक्रा हुन्। तिनीहरूले बिजुली आपूर्तिको लागि एक कनेक्टरको रूपमा कार्य गर्नेछन्। सबै तत्वहरू श्रृंखलामा जडान हुन्छन्।
अन्तिम चरणमा, लिपिहरू ब्याट्रि डिब्बेमा सम्मिलित छन्। Polarity को लागी यो महत्त्वपूर्ण छ। संपर्क समूहको विरुद्ध सम्पर्कहरू दबाईएको छ। कन्टेनर उपकरण चार्ज गर्ने प्रक्रियामा खुल्ला रहन्छ।
त्यसोभए, हामी पत्ता लगाए कि कसरी घरको लागि उपयोगी घर बनाएको चीजहरू हाम्रो आफ्नै हातमा। तपाईंको प्रयासमा शुभकामना!
एक जना पक्षी फिडर कसरी आफ्नै हातले बनाउछ
प्लास्टिकको पाइपहरू आफ्नै हातमा टाँस्दै। प्लास्टिक पाइप सोर्सिंग को लागि प्रौद्योगिकी र उपकरण
हिउँ कसरी बनाउने? कृत्रिम बर्फ कसरी बनाउने?
टायरबाट एक सेप्टिक टैंक कसरी बनाउने?
घुम्रेको बिरालो भनिन्छ नस्ल?
Crochet बाँदर कसरी बुनना गर्न? शुरुआती लागि ड्राइभिङ, को विवरण
घर मा फुच्चे Schnauzer सैलुन विशेषताहरु
प्रकार कुखुरा दिन: वर्णन, विशेषताहरु, सामग्री, समीक्षा, फोटो
फिफा 15 मा होनहार खेलाडी र खेलाडीहरू को कुल दर्जा
के बैंक सेवाहरू कार्ड "मकै"? कसरी बनाउने र "मकै" क्रेडिट कार्ड Replenish?
एलसीडी "Jubilee" - मास्को बाहिर अर्थव्यवस्था वर्ग आवास, तर महानगरबारे नजिकै
खेल स्वर्ण बारुद बारेमा सबै कुरा। खेल समीक्षा
रक्सी लत को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी
मेट-50 - एक सैनिक सबैभन्दा विश्वसनीय मित्र
Abkhaz mandarins: बाली काट्ने सिजन। Abkhaz mandarins: समीक्षा